आत्महत्या, सवारी दुर्घटना र करेन्ट लागेका पनि मधेसी मोर्चाका सहिद ! १० लाख क्षतिपूर्ति दिन माग – YesKathmandu.com
काठमाडौं । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा मारिएका ४२ जनालाई सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । तर मोर्चाले आत्महत्या, सवारी दुर्घटना र करेन्ट लागेर मुत्यु भएकाहरुलाई पनि आन्दोलनमा मारिएको भन्दै १० लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गृहमन्त्रालयलाई सुचि पठाएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४२ जना मृतक परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिइसकेको थियो । ओली पछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरयो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले ४२ बाट बढाएर मृतकको संख्या ६२ पुरयाएको थियो । त्यसपछि पनि मधेसी मोर्चाले ६ जनाको नाम थपेर पठाएका छन् । पछिल्लो पटक पठाइएका ६ जनामा सवारी दुर्घटना, आत्महत्या र करेन्ट लागेर मृत्यु भएका ब्यक्ति भएको खुलासा भएको छ ।
तर मधेसी मोर्चा आफ्नो आन्दोलनमा ४२ जना नभई ६८ जनाको मृत्यु भएको दावी गर्दै गृहमन्त्रालयलाई मृतकको नाम दिएको छ । गृहमन्त्रालयलाई दिइएको नाममा आत्महत्या गरेका, सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाहरुलाई पनि सहिद घोषणा तथा १० लाख क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।
संघिय समाजवादी फोरम सिराहका नेता बालकृष्ण रायले आत्महत्या गरेका थिए । तर मोर्चाले उनको मृत्यु आन्दोनलका क्रममा भएको भन्दै सहिद घोषणा र १० लाख क्षतिपूर्ति मागेको छ । त्यसैगरी शैलेश यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो । उनलाई पनि सहिद घोषणा र १० लाख क्षतिपूर्ति दिन मोर्चाले माग गरेको छ ।
मोर्चाको मागलाई गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्वीकार गर्दै थप ६ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा लिने तयारी गरेको छ । कालगतिमा मरेमा ब्यक्तिलाई पनि सहिद बनाउन र राज्यकोषबाट रकम लिन मोर्चाले यस्तो रणनीति बनाएको हो । मोर्चालाई फकाउने नाममा सरकारले उनीहरुको गैरकानुनी कार्यलाई पनि मान्यता दिन थालेको छ । राज्यकोषबाट ६ करोड ८० लाख रकम खर्च हुने भएको छ ।
One thought on “आत्महत्या, सवारी दुर्घटना र करेन्ट लागेका पनि मधेसी मोर्चाका सहिद ! १० लाख क्षतिपूर्ति दिन माग”
मधेसवादी दलाल नेताहरुको त के कुरा गर्नु र, मावाबादिले पनि मौकाको फाइदा लिन, जति बढी सहिद बनाउन सक्यो उति आफुलाई पनि बढी आर्थिक लाभ हुने भित्रि साठ-गाठको कमाल हो यो …
हत्या अभियुक्त छोराको छानविन रोक्न आइजीपीले लिए प्रधानमन्त्रीको सहारा
अपराध अभियोगमा जेल जाने पालो अब यी सांसदको
आइजीपी अर्यालका छोरामाथि आफ्नै साथीको हत्या गरेको आरोप
कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यमाथी हिन्दु युवाहरुको आक्रमण
पूर्वप्रेमिकासँग रिस फेर्न दुई महिनाको बालक अपहरण